KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Ashaninka Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Wɔhyehyɛɛ asoɛe hɔ nnipa maa mmusuakuw abiɛsa biara yɛɛ asafo baako (1-34)
Yuda mmusuakuw abiɛsa asafo no wɔ apuei (3-9)
Ruben mmusuakuw abiɛsa asafo no wɔ anaafo (10-16)
Lewi asoɛe wɔ mfinimfini (17)
Efraim mmusuakuw abiɛsa asafo no wɔ atɔe (18-24)
Dan mmusuakuw abiɛsa asafo no wɔ atifi (25-31)
Mmarima a wɔkyerɛw wɔn din no nyinaa dodow (32-34)
2 Ɛnna Yehowa ka kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ: 2 “Israelfo no nkyekye wɔn asoɛe wɔ baabi a wɔde ama mmusuakuw abiɛsa asafo+ a wɔwom no. Obiara ntena baabi a ɛbɛn n’agyanom abusuafi frankaa.* Wɔmma wɔn asoɛe no anim nkyerɛ ahyiae ntamadan no, na entwa ho nhyia. 3 “Wɔn a wobesi wɔn ntamadan wɔ apuei fam, baabi a owia pue fi no ne mmusuakuw abiɛsa asafo a Yuda abusuakuw da wɔn ano a obiara wɔ n’asraafokuw no. Yuda abusuapanyin ne Aminadab ba Naason.+ 4 N’asraafo a wɔkyerɛw wɔn din no dodow yɛ 74,600.+ 5 Wɔn a wɔbɛkyekye wɔn asoɛe wɔ ne nkyɛn ne Isakar abusuakuw no. Isakar abusuapanyin ne Suar ba Netanel.+ 6 N’asraafo a wɔkyerɛw wɔn din no dodow yɛ 54,400.+ 7 Wɔn a wɔka ho ne Sebulon abusuakuw no. Sebulon abusuapanyin ne Helon ba Eliab.+ 8 N’asraafo a wɔkyerɛw wɔn din no dodow yɛ 57,400.+ 9 “Enti asraafo a wɔwɔ Yuda asoɛe hɔ a wɔkyerɛw wɔn din nyinaa dodow yɛ 186,400. Sɛ wɔretu* afi baabi a wɔsoɛe no a, wɔn na wobedi kan atu.+ 10 “Mmusuakuw abiɛsa asafo a Ruben+ abusuakuw da wɔn ano a obiara wɔ n’asraafokuw no na wobesi wɔn ntamadan wɔ anaafo fam. Ruben abusuapanyin ne Sedeo ba Elisur.+ 11 N’asraafo a wɔkyerɛw wɔn din no dodow yɛ 46,500.+ 12 Wɔn a wɔbɛkyekye wɔn asoɛe wɔ ne nkyɛn ne Simeon abusuakuw no. Simeon abusuapanyin ne Surisadai ba Selumiel.+ 13 N’asraafo a wɔkyerɛw wɔn din no dodow yɛ 59,300.+ 14 Wɔn a wɔka ho ne Gad abusuakuw no. Gad abusuapanyin ne Reuel ba Eliasaf.+ 15 N’asraafo a wɔkyerɛw wɔn din no dodow yɛ 45,650.+ 16 “Enti asraafo a wɔwɔ Ruben asoɛe hɔ a wɔkyerɛw wɔn din nyinaa dodow yɛ 151,450. Sɛ wɔretu* afi baabi a wɔsoɛe no a, wɔn na wɔto so abien a wobetu.+ 17 “Sɛ wɔde ahyiae ntamadan no rekɔ a,+ ɛsɛ sɛ Lewifo* no di mmusuakuw a aka no* mfinimfini. “Sɛnea wɔahyehyɛ wɔn ho wɔ asoɛe hɔ no, sɛ wɔrekɔ a, saa ara na ɛsɛ sɛ wɔhyehyɛ wɔn ho.+ Obiara nni n’afa sɛnea wɔahyehyɛ mmusuakuw abiɛsa asafo a ɔwom no. 18 “Mmusuakuw abiɛsa asafo a Efraim abusuakuw da wɔn ano a obiara wɔ n’asraafokuw no na wobesi wɔn ntamadan wɔ atɔe fam. Efraim abusuapanyin ne Amihud ba Elisama.+ 19 N’asraafo a wɔkyerɛw wɔn din no dodow yɛ 40,500.+ 20 Wɔn a wɔbɛkyekye wɔn asoɛe wɔ ne nkyɛn ne Manase+ abusuakuw no. Manase abusuapanyin ne Pedasur ba Gamaliel.+ 21 N’asraafo a wɔkyerɛw wɔn din no dodow yɛ 32,200.+ 22 Wɔn a wɔka ho ne Benyamin abusuakuw no. Benyamin abusuapanyin ne Gideoni ba Abidan.+ 23 N’asraafo a wɔkyerɛw wɔn din no dodow yɛ 35,400.+ 24 “Enti asraafo a wɔwɔ Efraim asoɛe hɔ a wɔkyerɛw wɔn din nyinaa dodow yɛ 108,100. Sɛ wɔretu* afi baabi a wɔsoɛe no a, wɔn na wɔto so abiɛsa a wobetu.+ 25 “Mmusuakuw abiɛsa asafo a Dan abusuakuw da wɔn ano a obiara wɔ n’asraafokuw no na wobesi wɔn ntamadan wɔ atifi fam. Dan abusuapanyin ne Amisadai ba Ahiesa.+ 26 N’asraafo a wɔkyerɛw wɔn din no dodow yɛ 62,700.+ 27 Wɔn a wɔbɛkyekye wɔn asoɛe wɔ ne nkyɛn ne Aser abusuakuw no. Aser abusuapanyin ne Okran ba Pagiel.+ 28 N’asraafo a wɔkyerɛw wɔn din no dodow yɛ 41,500.+ 29 Wɔn a wɔka ho ne Naftali abusuakuw no. Naftali abusuapanyin ne Enan ba Ahira.+ 30 N’asraafo a wɔkyerɛw wɔn din no dodow yɛ 53,400.+ 31 “Enti asraafo a wɔwɔ Dan asoɛe hɔ a wɔkyerɛw wɔn din nyinaa dodow yɛ 157,600. Sɛ wɔretu* afi baabi a wɔsoɛe no a, wɔn na wotwa to a wobetu,+ sɛnea wɔahyehyɛ mmusuakuw abiɛsa asafo a wɔwom no.” 32 Eyinom ne Israelfo a wɔkyerɛw wɔn din huu nnipa dodow a ɛwɔ wɔn agyanom abusuafi biara mu no. Nnipa a wɔwɔ asoɛe ahorow hɔ a wobetumi ayɛ asraafo, a wɔkyerɛw wɔn din no dodow yɛ 603,550.+ 33 Nanso Lewifo no de, sɛnea Yehowa ka kyerɛɛ Mose no, wɔankyerɛw wɔn din+ anka Israelfo a aka no ho.+ 34 Na Israelfo no yɛɛ nea Yehowa ka kyerɛɛ Mose no nyinaa. Enti sɛɛ na na Israel mmusuakuw abiɛsa asafo ahorow no+ kyekye asoɛe na wotu fi wɔn asoɛe.+ Ná wɔhyehyɛ wɔn ho mmusua mmusua ne sɛnea wɔn agyanom abusuafi te.
^ Anaa “ahyɛnsode.”
^ Anaa “Israelfo retu.”
^ Anaa “Lewifo asoɛe.”
^ Anaa “mmusuakuw a aka no asoɛe.”